Vaovao - Ahoana ny fanesorana epoxy, lakaoly, coatings amin'ny gorodona simenitra
Ahoana no hanesorana epoxy, lakaoly, coatings amin'ny gorodona simenitra
Ny epoxies sy ny tombo-kase hafa toy izany dia mety ho fomba tsara tarehy sy maharitra hiarovana ny simenitrao saingy mety ho sarotra ny manala ireo vokatra ireo. Eto dia manoro anao fomba vitsivitsy izay afaka manatsara ny fahombiazan'ny asanao.
Voalohany, raha tsy dia manify loatra ny epoxy, lakaoly, loko, coatings eo amin'ny gorodonao, toy ny ambany 1mm, azonao atao ny manandrana mampiasa Metal Bond Diamond Grinding Shoesmiaraka amin'ny ampahany maranitra zoro, toy ny zana-tsipìka fizarana, rhombus fizarana sy ny sisa, mba hampitombo ny maranitra, dia tsara kokoa ny mifidy fizarana tokana fitotoana kiraro. Manao kiraro fikosoham-bary isan-karazany izahay ho an'ny milina samihafa, ohatra, Husqvarna, HTC, Lavina, Werkmaster, Sase, STI, Terrco sns, serivisy ODM/OEM dia misy ho antsika.
Faharoa, Raha somary matevina ny epoxy amin'ny gorodona, mandritra ny 2mm ~ 5mm, azonao atao ny manandrana mampiasa PCD Gring Toolshamaha ny olana. Ny diamondra polycrystalline (PCD) dia diamondra mitambatra miaraka amin'ny fepetra avo lenta sy hafanana amin'ny fisian'ny metaly catalytic. Ampitahao amin'ny kiraro fikosoham-bary mahazatra, tsy hameno na hanosotra ny coating izy ireo; Ny fitaovana fikosoham-bary PCD dia iray amin'ireo vokatra mahomby indrindra amin'ny fanesorana ny coatings, afaka mamonjy haingana ny fotoananao sy ny vidin'ny asa; manana androm-piainana lava be izy ireo, mampihena be ny vidin'ny fitaovanao. Ny haben'ny PCD sy ny laharan'ny fizarana dia azo fidina ho fangatahanao.
Fahatelo, Raha tena matevina ny epoxy, dia azo ampiasaina ny milina fanapoahana baomba hanesorana ny topcoats epoxy sy ny sealant / loko hafa amin'ny gorodona simenitra. Ny milina fanapoahana baomba dia mampiasa pellet metaly kely (tifitra) mipoitra eo amin'ny simenitra, manala izay misy fonon-toerana mafy loha. Ireo milina ireo dia manodina ny tifitra izay mampihena ny fako. Izy ireo koa dia manana rafitra banga mipetaka ka esorina ny ankamaroan'ny vovoka. Io no iray amin'ireo fomba tsara indrindra sy haingana indrindra amin'ny fanesorana ireo sealant topical matevina amin'ny gorodona simenitra. Ny lafiny ambany amin'ny fampiasana ireo milina ireo dia ny mamela ny gorodona ho ratsy toy ny sisin-dalana ka ny ankamaroan'ny simenitra anatiny dia tsy maintsy hajaina aorian'ny fampiasana.
Farany, raha sahirana amin'ny fomba hanesorana epoxy, coating, lakaoly amin'ny simenitra ambonin'ny tany ianao dia aza misalasala mifandray aminay, afaka manolotra ny fitaovana tsara indrindra hamahana izany izahay.
Fotoana fandefasana: Nov-05-2021